Huawei dia nihoatra ny telefaona 100 tapitrisa namidy tamin'ny taona 2019 | Androidsis
Huawei dia efa namidy finday 100 tapitrisa hatreto tamin'ity taona ity
Huawei dia namela vaovao be dia be ho antsika tato anatin'ny ora farany, miaraka amin'ny fampisehoana ny laharana Nova 5 ary ny vaovao MediaPad M6. Na dia nitondra vaovao bebe kokoa aza ny marika sinoa tamin'ilay hetsika fampisehoana nataony tany Shina. Hatramin'ny nanambaran'izy ireo ny angona varotra izay ananany hatreto amin'ity taona ity. Data vitsivitsy izay tonga amin'ny fotoana lehibe ho an'ny orinasa, noho ny fanakanany any Etazonia.
Noho io fanakanana io, Miharihary ny fianjeran'i Huawei. Vao nanamafy ny CEO azy manokana latsaka 40%. Na dia hatreto aza tamin'ity taona ity, ny varotra ny marika sinoa dia tena tsara, toy ny voalaza tamin'ity hetsika ity.
Satria efa voamarina, tamin'ny 30 Mey, telefaona 100 tapitrisa no namidy. Tarehimarika iray izay tsy isalasalana fa milaza mazava fa mandra-pahatongan'ity sakana ity dia nanana valiny tsara teo amin'ny tsena izy ireo. Noho ireo varotra ireo dia akaiky kokoa ny Samsung izy ireo.
Ireo tarehimarika ireo dia mamela tahiry mahaliana, satria naneho hevitra momba izany Huawei dia mivarotra smartphone 7 isan-tsegondra. Varotra izay vitsy marika ankehitriny no afaka hahatratra. Na dia misy fiantraikany ratsy amin'ireo varotra ireo aza ny sakana ankehitriny, izay azo antoka fa hianjera amin'ity telovolana faharoa ity.
Ankoatr'izay, tratra io isa mitentina 100 tapitrisa io 49 andro mialoha ny tamin'ny taon-dasa. Ka i Huawei dia nivarotra tamin'ny taha ambony lavitra noho izay hitantsika tamin'ny taona 2018, izay efa taona tsara ho an'ny orinasa. Fandrosoana mialoha izay mametraka azy ireo avo kokoa sy avo lenta amin'ny laharan'ny varotra.
Mahaliana ny mahita ny fomba hifindran'ny Huawei afaka herinandro vitsivitsy, miaraka amin'ity hidin-trano ity. Mihena ny varotra ataon'izy ireo, na dia tsy fantatsika aza hoe hafiriana. Mandeha hatrany ny tsaho momba ny fifanarahana mety hitranga. Ka manantena izahay fa handre anao haingana momba izany. Fifanarahana azo antoka izay manampy amin'ny fampiroboroboana indray ny varotrao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei dia efa namidy finday 100 tapitrisa hatreto tamin'ity taona ity
Xiaomi CC: Ny firaisana amin'ny Xiaomi sy Meitu dia efa manana anarana
Miditra amin'ny Android i Valve miaraka amin'ireo Dota Underlords lehibe sy ny multiplayer crossover-ny